Nagu saabsan - Amazons Qalabka Furniture Co.Ltd.
Yamazonhome waxaa la aasaasay 2012, markii hore inta badan wuxuu ku howlanaa soo saarista golaha wasiirada Mareykanka iyo qalabka casriga ee Yurub. Hadda, waxay noqotay alaab-qeybiye heerkiisu sarreeyo, oo awood u leh inay bixiso saafafka gogosha leh, alaabta guriga laga sameeyo ee alwaaxda adag, qalabka guryaha ee fidsan, qalabka guryaha xayawaanka ah iyo isboortiga. Shirkaddu waxay leedahay 180 shaqaale warshaduna waxay ku fadhidaa dhul dhan 18,000 oo mitir murabac ah. Waxay ku taalaa No. 300 Yuanfeng Street, Shouguang City, Gobolka Shandong. Waxay leedahay saddex khadadka wax soo saarka alaabta guriga si buuxda u farsameysan, mashiinnada goynta otomaatiga si otomaatig ah, mashiinnada wax lagu xiro, mashiinada feerka, iyo xarumaha ka shaqeynta CNC. Iyo qalabka kale ee wax soo saarka alaabta guriga. Waxaa jira 5 naqshadeeyayaal ah alwaax adag oo alwaax ah, qalabka guryaha, iyo qalabka guryaha lagu dhaqdo, kuwaas oo qaabeyn kara soona saari kara noocyo kala duwan oo ah qalabka guryaha sida ku xusan shuruudaha macaamiisha.
Sannadka 2020, shirkaddu waxay soo saari doontaa koox cusub oo soo saarta qalabka isboortiga ee R&D, oo inta badan ku hawlan R&D iyo soo saaridda sariirta dusha sare iyo mootooyinka la buufin karo. Waxyaabaha ay soo saarto shirkadda ayaa loo iibgeeyaa dalal iyo gobollo kala duwan oo ku kala yaal Yurub, Ameerika, Bariga Dhexe, Afrika iyo Koonfurta Ameerika, waxaana qiimaha iibka sanadlaha ahi ka badan yahay 60 milyan oo doollarka Maraykanka ah. Kusoo dhawow macaamiisha dibada si aad u booqato shirkadeena ugana hadasho iskaashiga.
Yamazonhome wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa soosaarka alaabta xafiisyada wuxuuna hadda u xuubsiibtay shirkad baaxad weyn oo wax soo saar alaabeed oo isku dhafan soosaarka iyo iibinta sofasyada fudud, qalabka guryaha xayawaanka ah, qalabka alwaaxda ee muraayadaha wanaagsan leh iyo, qalabka wax soo saarka alaabta guriga. Shirkadda waxaa markii hore aasaasay maareeyaha dadweynaha Meng Linggang. Iyada oo ku saleysan maskaxda raadinta badbaado leh daacadnimo iyo raadinta horumar leh hal-abuurnimo, shirkaddu waxay si firfircoon ugu sii socotaa waddada ganacsiga soo-saarka alaabta alaabta guryaha e-ganacsiga ah ee xudduudaha ka gudbaya.
Khadadka wax soo saarka alaabta casriga ah ee cusub ee ay dhistay Yamazon waxay ku guuleystaan ​​wax soo saar sanadle ah oo gaaraya 72,000 mitir murabac oo ah qalabka guryaha U abuur 39 shaqooyin cusub, u soo kordhi dakhli badan 39 qoys oo u samee injiillo badan qoysaska shaqaalaha